Soomaalida UK oo dhigay banaabax looga soo hor jeedo gardarrada Kenya – Somali Top News
Soomaalida UK oo dhigay banaabax looga soo hor jeedo gardarrada Kenya
Magaalada London ee dalka Ingariiska ayaa Maanta waxaa ka dhacay Banaanbax ballaaran,kaasi oo ay dhigeen 100 oo kamid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi kunool.
Banaanbaxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee Safaaradda Kenya ay ku leedahay London,isla markaana looga soo horjeeday Khilaafka Diplomaasiyadeed ee Somalia iyo Kenya ee ka dhashay muranka dhinaca Xuduud-baddeedka.
Mid kamid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee London oo la hadlay Focus on Afrika ayaa Cambaareeyay boobka ay dowlada Kenya ku heeyso dhulka Soomaaliya iyo tallaabada ay ku dooneyso inay kula wareegto Gobolada Jubbooyinka.
Sidoo kale dadka dhigayay banaanbaxaya ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin Doonimeyno Kenya iyo Soomaaliya iib ma’ahan.
Khilaafka Diplomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka dhashay muranka dhinaca Xuduud-baddeedka, iyo tallaabadii ay ugu yeertay Danjirahoodii u joogay Somalia, kuna soo cayriyeen Danjiraha Somalia u joogay Nairobi.
← Burundi oo ku hanjabtay in ciidamadeeda kala bixi doonto Soomaaliya
Cabsi aad u weyn oo soo wajahady ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya →
Akhriso: Dastuurka Soomaaliya oo sharaxaya qaabka loo mari karo xil ka qaadista Madaxweynaha
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo ka hadlay shacabkii lagu laayay deegaanka Xaawo Cabdi
Dhoob-Daareed oo laga qaaday xasaanada Xildhibaanimada Puntland
December 10, 2019 Somali Top News 0